Nezvedu - Langfang Bonai Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Langfang Bonai Environmental Technology Co., Ltd. yakavambwa muna 2008 uye inovhara nzvimbo inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemamirimita. Kutanga kubva kuUFP zvigadzirwa, inodyara mamirioni gumi nemaviri uye ine vashandi ve76, kusanganisira vatatu veR&D. Muna 2010, yakaunza maviri FRP anoramba achigadzira mitsara kubva kuAustralia. Kune matatu ekare antique mataira ekugadzira uye maviri pc bhodhi ekugadzira mitsara, ine yegore kuburitsa kukosha kweanopfuura mamirioni makumi masere.
Kambani yedu yakateedzana uye ikaburitsa simbi mamiriro edenga emadziro uye emadziro mapaneru neGerman neJapan, ichinyanya kuburitsa mapaneru emwenje, anti-corrosion panels, gel coat panels, murazvo unodzora mapaneru, matare emarara, mapaneru ezuva, FRP magedhi, nezvimwewo, uye kutumira kunze kwenyika dzinopfuura makumi mana nematunhu, unogamuchirwa kuti uuye kuzoongorora.
"Kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu kusingaperi" mabhodhi emhando yepamusoro, akakwana mushure-kutengesa sevhisi, kupindura mibvunzo yevatengi mune yekutanga nhanho, kupa emhando yepamusoro mabhodhi, uye akakwana mushure-kutengesa masevhisi ndiwo matanho matatu ekutanga. Kugutsikana kwevatengi ndicho chinangwa Chisungo chisingaperi chevanhu vePRP: Bonai's tenet: "Hunhu hwekutanga. Kutendeseka manejimendi" kunoenderana nekuvimbika, kwakavakirwa pakutenda, uye kutarisa mhando sekadhi rebhizinesi rekutanga reBonai FRP vanhu kupfuudza kune vatengi. Bonai anoshandisa kutendeka uye mhando. Shandira sebhiriji rekutaurirana nevatengi;
"Sayenzi nehunyanzvi ndiwo musimboti wekugadzira uye sosi yekusimudzira kwebhodhi re BOER" kune vatengi .Providing yemhando yepamusoro mabhodhi ibasa risingadzoreki revanhu veBonai uye dombo repakona rebudiriro yemunhu wese;
Kutenda kwakasimba, enda pamwe chete, gadzira kupenya, gadzira denga rebhuruu idzva mu FRP indasitiri!